'Face ID haisi kuwanikwa' pane yako iPhone? Heino mhinduro chaiyo (zvakare yePads)! - Zvimwe
iphone yangu haibvumirane nekombuta yangu
wifi nei kusasheedza basa
iphone 6 mvura iri pasi pechidzitiro
zvinyorwa zve iphone zvisina kurongeka
sync manotsi kubva iphone kusvika pc
Face Id No Est Disponible Un Tu Iphone
Chiso ID hachishande pane yako iPhone kana iPad uye hauzive nei. Zvisinei nezvaunoita, haugone kuvhura chishandiso chako kana kumisikidza Chiso ID kekutanga. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura kwauri zvekuita kana iyo iPhone 'Face ID isipo' . Aya matanho achakubatsira iwe kugadzirisa Face ID pane yako iPad!
Tangazve yako iPhone
Kutangazve yako iPhone kana iPad ndiko kugadzirisa nekukurumidza kwechidiki software glitch iyo ingave iri chikonzero nei Face ID isingawanikwe. PaPhones, panguva imwe chete tinya uye ubatise bhatani repadivi uye bhatani bhatani kusvikira iyo 'slide yekudzima simba' inotsvedza yaonekwa pachiratidziri.
Svetedza denderedzwa chena uye tsvuku simba icon kubva kuruboshwe kurudyi kudzima yako iPhone X kana modhi nyowani. Dhinda uye bata bhatani repadivi kusvikira iyo logo yeApple yaonekwa pachiratidziro kuti udzorere yako iPhone.
PaPads, tinya uye ubatise bhatani remagetsi kudzamara 'slide yemagetsi kudzima' yaonekwa. Kungofanana ne iPhone, slide chena uye tsvuku simba icon kubva kuruboshwe kuenda kurudyi kudzima yako iPad. Mira nguva shomana, wobva wadzvanya wabata bhatani remagetsi zvakare kuvhura yako iPad zvakare.
maitiro ekuomesa zvakaoma iphone xs
Ita shuwa kuti Hapana Chakavhara Notch kana Notch
Kana iyo TrueDepth kamera pane yako iPhone kana iPad yakavharika, Face ID haizokwanisa kuziva kumeso kwako, saka hazvishande. Iyo TrueDepth kamera inowanikwa mune notch kana notch yeiyo iPhone X uye nyowani mamodheru, iwe unogona zvakare kuiwana iri pamusoro peiyo iPad yako kana iwe uchiibata mumifananidzo yemifananidzo.
Rangarira kuve nechokwadi chepamusoro che iPhone yako kana iPad chakachena zvachose, zvikasadaro Face ID inogona kusashanda nemazvo. Kutanga, tora microfiber mucheka uye pukuta notch kumusoro kweiyo iPhone skrini. Tevere, ita shuwa kuti yako kesi haisi kutadzisa iyo TrueDepth kamera.
Ita shuwa kuti hapana chakavhara kumeso kwako
Chimwe chikonzero chakajairika chekuti Chiso ID chingave chisipo nekuti chimwe chinhu chiri kuvhara kumeso kwako. Izvi zvinoitika kwandiri kazhinji, kunyanya kana ndakapfeka ngowani uye magirazi ezuva.
Bvisa ngowani yako, hood, magirazi ezuva, kana balaclava usati waedza kumisikidza Face ID pane yako iPhone kana iPad. Kana kumeso kwako kuchioneka uye Chiso ID chisipo, enderera padanho rinotevera.
Bata yako iPhone kana iPad mune yemifananidzo maitiro
Chiso ID chinoshanda chete kana iwe ukabata yako iPhone kana iPad mune yemifananidzo maitiro. Kunongedzwa kwemifananidzo zvinoreva kubata yako iPhone kana iPad yakatwasuka, pane kudivi rayo (kana yakatwasuka). Iyo TrueDepth kamera ichave iri pamusoro pechidzitiro paunobata yako iPhone kana iPad mune yemifananidzo maitiro.
Gadziridza iOS kune yayo Nyowani Shanduro
iOS ndiyo inoshanda sisitimu inomhanya pane yako iPhone kana iPad. Kugadziriswa kweIOS kunounza maficha nyowani uye dzimwe nguva kugadzirisa madiki kana makuru software matambudziko.
Enda ku Zvirongwa -> General -> Software kugadzirisa kuona kana vhezheni itsva yeIOS iripo. Dhinda Dhawunirodha uye gadza kana paine software yekuvandudza inowanikwa.
Isa yako iPhone kana iPad muDFU modhi
Nhanho yekupedzisira yekugadzirisa zvinogona kuitika zve software zvichikonzera iyo iPad kana iPhone kuti iti 'Face ID haiwanikwi' ndeyekuisa muDFU modhi uye kuidzosera. Iyo DFU (mudziyo firmware yekudzoreredza) ndiyo yakanyatso kudzosera iwe yaunogona kuita pane iyo iPhone kana iPad. Erase uye reload zvakare yega yega kodhi yekodhi pane chako chishandiso, uchisiya iyo firmware uye software yakanakisa senge nyowani.
Ndinokurudzira kuchengetedza iPhone kana iPad backup usati waisa muDFU modhi. Kana wagadzirira, tarisa edu nhanho-nhanho nongedzo kune DFU kudzoreredza . Kana iwe uri kunetsa yako iPad, tarisa vhidhiyo yedu pa maitiro ekuisa iPads muDFU modhi .
IPhone uye iPad Kugadzirisa Sarudzo
Iwe uchafanirwa kutora yako iPhone kana iPad kune yepedyo Apple Chitoro kana ichiri kuti 'Face ID haiwanike'. Panogona kuve nechinetso chehardware neiyo TrueDepth kamera.
Usanonoka kupinda Chirongwa Kugadzwa kuApple Chitoro chako. Apple inochinjanisa yako isina kunaka iPhone kana iPad kune imwe nyowani, kana ichiri mukati menguva yekudzoka. Apple zvakare ine yakakura mail-mukugadzirisa chirongwa kana iwe usingakwanise kusvika kune chaiko nzvimbo.
Chiso ID: Inowanikwa zvakare!
Face ID inowanikwa pane yako iPhone kana iPad uye ikozvino unogona kuvhura chishandiso chako nekungochitarisa. Inotevera nguva iyo yako iPhone kana iPad painoti 'Face ID haiwanike', iwe unozoziva kugadzirisa dambudziko racho. Inzwa wakasununguka kusiya chero imwe Meso ID mibvunzo yauinayo pazasi muchikamu chekutaura!